Maxkamada sare oo mudada xabsiga usii kordhisay eedeysane Keshvari. - NorSom News
Maxkamada sare oo mudada xabsiga usii kordhisay eedeysane Keshvari.
Maxkamada sare ee dalkan Norway ayaa maanta 11 bilood oo xabsi ah ku xukuntay Mezyar Keshvari oo ah siyaasi horey uga tirsanaa xisbiga midigta fog, kana tirsanaa xubnaha baarlamaanka Norway. Keshvari ayaa maxkamada sare u gudbiyay cabasho ku saabsan xukun hore loogu xukumay oo 7 bilood ahaa, isaga oo rajo ka qabay in loo fududeeyo.
Balse maxkamada sare ayaa Keshvari xukunkii hore ee 7-da bilood ahaa ugu dartay 4 bilood oo kale, wuxuuna hada isku dar ku xukumanyahay 11 bilood oo xabsi ah.
Keshvari ayaa loo xukumay danbi la xiriira wax is daba marin iyo khiyaano dhaqaale, isaga oo lacag gaareyso 450.000 ka khiyaanay golaha baarlamaanka Norway oo uu katirsanaa. Wuxuuna qirtay inuu baarlamaanka usoo gudbin jiray warqado safar oo been ah, si loo siiyo qarashaadka ay baarlamaanka ugu talagaleen xildhibaanada safarada shaqa u baxa. Halkan kasii akhri
Xigasho/kilde: Keshvari får strengere straff – dømt til elleve måneders fengsel.
Previous articleWaxaan qabanay daawooyinka la isku cadeeyo oo Norway dhuumasho lagu soo galiyo.
Next articleNorway: Ruushka ayaa jabsaday computerada baarlamaanka Norway.